၉၆၉ အမှတ်တံဆိပ်သည်အသုံးပြုလှုပ်ရှားမှုများသည် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့် မညီဟု့ဆို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၉၆၉ အမှတ်တံဆိပ်သည်အသုံးပြုလှုပ်ရှားမှုများသည် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့် မညီဟု့ဆို
၉၆၉ အမှတ်တံဆိပ်သည်အသုံးပြုလှုပ်ရှားမှုများသည် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့် မညီဟု့ဆို
Posted by mg nu on Sep 17, 2013 in Creative Writing, Myanma News, News | 12 comments
၉၆၉ အမှတ်တံဆိပ်သည်အသုံးပြုလှုပ်ရှားမှုများသည် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက
ယခုဗုဒ္ဓဘာသာ အတိမ်းအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်ယခုမှ ၉၆၉ ကိုအသုံးပြုလှုပ်ရှားနေ
ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်တွင်ကျင်းပသော သတ္တမအကြိမ်နိုင်ငံတော်သံဃနာ ယက အဖွဲ့ ၄၇ ပါး စုံညီဒုတိယအစည်းအဝေးမှထိုကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၉၆၉
သာသနာပါ ဂဏ၀ါစကနှင့် သံဃာ့ကွန်ယက်အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေမှုကို
လိုအပ်သလို့သြ၀ါဒပေးနိုင် ပါရန်လျှောက်ထားတင်ပြမှုနှင့် ယခင်ကရှိပြီးသောနိုင်ငံ
တော်သံဃနာယကအဖွဲကို လွမ်းမိုး နိုင်ရန်လုပ်ဆောင်နေမှုတို့ကိုလျှောက်ထား
သံဃနာယကအဖွဲ့ စည်းမျဉ်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အခန်း ၂၊အပိုဒ်၎၊၅၊၈၊
အရ လည်းကောင်း ၊သံဃာ့အဖွဲ့ စည်းမျဉ်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအခန်း ၂ ၊အပိုဒ်၃၊၅ နှင့်
အခန်ူ ၃ အပိုဒ် ၈၊၉ တို့အရ ညွန်ကြားလွာ ၈၁ အရ လည်း ထို့ကဲ့သို့နိုင်ငံတော်အသိ
အမှတ်ပြုထားသောနိုင်ငံတော်သံဃနယကအဖွဲ့ရှိပါလျှက်သီးခြားခွဲထွက်ခြင်းသဘော ဆောင်သောသီးခြားဂိုဏ် ကဲ့သို့ဖြစ်လာနိုင်ခြင်း၊ သာသနာအလုပ်မလုပ်ဘဲအရည်
ကြီးများကဲ့သို့လောကီရေးရာ၊လူမျိုးရေးရာ၊နိုင်ငံရေးရာနှင့်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာလှုပ် ရှားမှုများရောနှောနေသောထိုကဲ့သို့အစွန်းရောက်အဖွဲများဖြစ်လာနိုင်ပါသောကြောင့်ထိုကဲ့သို့အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းညွန်ကြားလွှာတွင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။၉၆၉အမှတ်
တံဆိပ် နှင့်ပတ်သက်၍ ထိုအဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူ ဦးဝီရသူတို့မှာယခင်
ရဟန်းအဖြစ်မှထုတ်ပယ်ပြီးထောင်ဒါဏ်(၄)နှစ်အပြစ်ပေးခံရပြီး၊ယခုအစိုးရလက်ထက်မှ ထောင်မှလွတ်လာပြီးထပ်မံဘာသာရေးအစွန်းရောက်ကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ရန် အတွက်အိန္နိယမှအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဘာသာရေးရောကာ၊အိန္နိယမှလူအုပ်စု့အကြမ်းဖက်မှုများကိုအခြေခံကာဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်များမှတီထွင်လိုက်သောအမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်ပါသည်။ထိုတံဆိပ်ကိုထိုအဖွဲ့မှနိုင်ငံတော်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုဖြိုခွဲပြီးသွေးခွဲစေ ရန်၊တိုင်းရင်းသားချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးကိုဖြိုခွဲစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖြန့်ဝေခြင်း ၊လိုက်ကပ်ခြင်းတို့ကိုအဆိုပါအဖွဲ့မှဦးဆောင်ပြီးပြုလုပ်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီး၊ထိုသွေးထိုးလှုံဆော်မှု၊သွေးထိုးတရားခွေတို့ဖြန့်ဝေမှုတို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မှုများအကြိမ်ကြိမ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပြီးအခြားဘာသာဝင်များနေထိုင်ရာအိုးအိမ်တို့ကို၉၆၉မျက်ကန်းမျိုးချစ်အစွန်းရောက်များကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးသတ်ဖြတ်ခဲ့သဖြင့်လူပေါင်းများစွာသေကြပြီးလူပေါင်းများစွာအိုးမဲအိမ်မဲ့ဘ၀သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လူပေါင်း ၁၉၂ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၁၄၀၀၀၀ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရကာ၊မိထ္ထီလာတွင်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရမှုမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လူပေါင်း ၄၄ဦးရှိပြီးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲံဖြစ်ခဲ့ရသူ ၁၃၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီးရပါသည်။
ပြီး ။ရခိုင်ပြည်နယ်သံတွဲမြို့တွင်လည်းအိမ်ပေါင်း ၃၅ အိမ်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါသည်၊
ထို့ကြောင့်Timeသတင်းစာတွင်ထိုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပုံကိုဗုဒ္ဓဘာသာအကြမ်ဖက်သမားဟု့ပင်ခေါင်စဉ်တပ်ခံခဲ့ရပြီး၉၆၉တံဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ညိုးနွမ်းစေသော နေရာများတွင် အသုံပြုလာခြင်းတို့ကြောင့်အဆိုပါအမှတ်ကို ဗုဒ္ဓသာသနာ ညိုးနွမ်းစေ
မည့်နေရာများတွင် အသုံးမပြုရန်ဇွန်လ ၁၄ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်သည့်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်
ဂုဏ်ဆိုတာ ယခင်ကတည်းကရှိတာ၊ ၉၆၉ ဆိုတာ ယခုမှပေါ်တာ၊ဘုန်းကြီးတို့လှုပ်ရှား
မှုတွေက အမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းစွာဘဲရှိမှပါ ဟု့ ဆရာတော် ဦးကေသရ(ထေရ၀ါဒဓမ္မကွန်
ယက်)ကမိန့်မှာသွားသည်၊ထို့နောက်ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင်ပါဝင်ခဲ့သောဘုန်း တော်ကြီးဦးကေလာစကက ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုနှင့်စစ်တပ်ပါဝင်မှုကိုဆက်စပ်
စည်းစားမိကြောင်းပြီးခဲ့သည့်လက်ပံတောင်းစီမံကိန်းများရပ်တန့်ရန်ဆန္နပြသောဘုန်း ကြီး၊ရဟန်း၊သံဃာများကိုအစိုးရမှရက်ရက်စက်စက်ဖြိုခွင်းခဲ့သော်လည်းယခုအခါအမုန်းတရားလှုံဆော်ပေးနေသူ သံဃာတော်များကို အရေးယူတားမြစ်ပိတ်ပင်ရန်လုပ်ဆောင်
နေခြင်းမရှိဘဲလွတ်ထားပေးထားသည်ဟု့ပြောကြားပြီး ယခု ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုမျိုးမလို့
ဦးဇောတတိကကလည်း အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်သောအစွန်းရောက် ၉၆၉
ထိုအပြင် ပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဌသူရဦးရွှေမန်းကလည်း လှုံဆော်
မှုများပြုလုပ်နေသော၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုများကို ဥပဒေအရအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းယခု
သူထိုအဖွဲ့များအား လုံးဝခွင့်မလွတ်ဘဲထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပေဒအရလည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာသာကိုအခြေခံ၍လူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားမှုများကိုလက်မခံကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး
လက်တွေ့တွင်တော့ရေရေရာရာဖြစ်မလာခဲ့ပါ၊နိုင်ငံရေးပါတီများကလည်းဘာသာရေး နှင့်လူမျိုးရေးရောနှောပြီးခုတုံးလုပ်စည်းရုံးခြင်းသည်ဥပဒေနှင့်ညိစွန်းကြောင်း ထို့ကြောင့်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးသွေးခွဲလှုံဆော်နေခြင်းများကြောင့်တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းသွေးကွဲလာခြင်း၊မခေါ်မပြောဖြစ်လာခြင်းနှင့်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုပါထိခိုက်လာနိုင်ပါသဖြင်သွေးခွဲနေခြင်းအားရပ်တန့်သင့်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတင်ပြ လိုက်ရပေသည်။
ပြသနာဂ မဟာသံဃနာယကအဖွဲ့သည် အစိုးရဩဇာခံတဗိုင်း ဖြစ်နေလို့ သံဃာထု၊ လူထုအတွင်း ကြည်ညိုမှု ကျဆင်းနေဒယ်။ အစိုးရလိုတမျိုး မလိုတမျိုး အုပ်ချုပ်သူ မျက်နှာကြည့် နေခဲ့တာများတော့ အရေးရေး ကြုံလာတဲ့အခါ ကျားကျားမီးယပ် ဖြစ်နေပြီပေါ့ကွယ်…။ ဒါနဲ့ နေပါအုံး.. ဗျောင်ထုဒဲ့ မောင်နုဂ မွတ်စ်လား ဖွတ်လား ခွပ်လား သိဗာရဈေကွယ်…။
ပြီးခဲ့တဲ့တရက်.. ယူအက်စ်ကနေမြန်မာပြည်သွားနေတဲ့ အသိတယောက် မင်န်ဘာဝင်ချင်တယ်ဆိုလို့… .မန်င်ဘာဝင်ခွင့်ခဏဖွင့်လိုက်တာ… ၀င်လာတဲ့သူတွေ အယောက်၂၀ထဲ.. မောင်နုရယ်.. အဲဒီအမေရိကန်တယောက်ရယ်ပဲထားပြီး.. ကျန်တာတွေဖျက်လိုက်ရပါတယ်..
ဆိုဒေါ့ မောင်နုက မှောင်ထုမှာ စောင်လုဒဲ့ အောင်ပု ဖြစ်လေမား…
မောင်နု အေးဝတီကြီးနဲ့ ဆလိုင်းဖင်ပြောင်သည် အတူတူပေလော? သို့မဟုတ် တဖွဲ့တည်းပေလော?
အဲ ဒီအဖွဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုက လူငယ်တစ်စု
ဗမာဆိုင်တကာလျှောက်သွားပြီး အဲဒီ ၉၆၉ အမှတ်တံဆိတ်
အဆုံးအမ (သာသနာ) လား
ကြည့်​လုပ်​ကြပါ ကွယ်​တို့ ….
ဟုတ်ပဗျာ…၇၈၆ ကို တုပြီး ၉၆၉ ထွင် ဗုဒ္ဓဘာသာရယ်လို့သတ်မှတ်
အရဟံ ဆိုတဲ့သင်္ကေတဟာ ရှေ့နှစ်ပေါင်းများစွာထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေရဲ့
ရှိပြီးသားသင်္ကေတပါ အိမ်တံခါးဝတို့ ဆိုင်းဘုတ်တို့မှာ အရဟံလို့ ရေးထားတွေ့နေရတာဘဲကိုနော့……
၉၆၉ ပရိတ်သတ် ကလည်း မနည်းဘူးဗျို့ 
လိုရင်တမျိုး…မလိုရင်တဖုံ အသုံးချခံနေရတာ သင်ခန်းစာယူသင့်ပြီ….အစိုးရနှင့်ပြည်သူကြားပြဿနာဖြစ်ရင် မည့်သူဖက်မှ မရပ်တည်ဘဲ အမှန်တရားဘက်ကို ရပ်တည်ပြီးဖြေရှင်းရမည့် ဓမ္မဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသင့်တယ်…အဲဒါဘုရားတပည့်ရဟန်းတွေဖြင့်သင့်တယ်…အခုမြန်မာပြည်မှာ ဓမ္မပျောက်တာကြာပြီဆိုတော့….အမှန်တရားအတွက်ဘယ်သူရပ်တည်ပေးမလဲ?…အချိန်ရရင်လေ့လာ ကြည့်ပါလား…
ဒေါ်စုတောင်တာဝန်ယူရှင်းပေးလို့မရတဲ့.. အစွန်းရောက်တို့တိုင်းပြည်မှာ… ရှေ့ထွက်ရပ်တဲ့ရဟန်း.. ထောင်ထဲဆွဲစေ့ပြီး.. ဖမ်းချုပ်ခံရမပေါ့…။
ဒါပေမယ့်.. တချို့အစွန်းရောက်ကိစ္စတွေဟာ.. အစွန်းရောက်နဲ့တုံ့ပြန်တာမျိုးဖြစ်သင့်.. လုပ်သင့်တယ်ထင်တာပဲ..
၉၆၉တွေကို.. ငွေနဲ့ဝယ်ရင်.. ဘယ်နှရာနှုန်းလောက်.. ခံနိုင်မလည်းဆိုတာပဲ..။ ခိုင်မာတဲ့… ဘာသာရေးသဘောအခြေခံမရှိတာမို့..
ဟေ့လူ ko out of သွားစမ်းပါဗျာ။ ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းတာတို့ ဆေးရိုးသည်ကန့်လန့် ကန့်လန့် လုပ်တာမျိုးတွေ မလုပ်စမ်းပါနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ မိုးပြားဂိုဏ်းရဲ့ လင့်ခ်တွေ လိုက်ပြမနေနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဗုံမဟုတ် ပတ်မဟုတ် အယူအဆကို လေ့လာဖို့ အချိန်လည်း မရဘူး။
ပြောခဲ့ဖူးတာလေး ထပ်ပြောမယ်။ ခင်ဗျားတို့ မိုးပြာဂိုဏ်းထဲက တာဝန်ယူပြီး ဖြေနိုင်တဲ့လူ ဘယ်သူရှိသလဲ။ ရှိရင် အဲဒီလူနဲ့ စကားပြောမယ်။ ခင်ဗျားတောင် ကိုယ်ရေးတဲ့ပို့စ် ကိုယ့်ဘာသာ တာဝန်ယူပြီး ဖြေရဲအောင်ပဲ အရင်လုပ်စမ်းပါဦး။
အမှန်တော့ ကျုပ်က ထောင်ထဲက ခင်ဗျားတို့ဆရာနဲ့ အမေးအဖြေ လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာ ကျုပ်မသိတာ မေးမလို့ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ဂိုဏ်းရဲ့ အကြောင်းတော့ ကျုပ်မသိပါဘူး။ သိလို့လည်း ကျုပ်အတွက် အကျိုးမရှိနိုင်ဘူး။ အဓိကကတော့ ကျုပ်က ဦးညာနကို ချွတ်ချင်တာ။ သူ့ဝါဒကြီး ကျွတ်သွားအောင်ပေါ့။
အဖွဲ့ရဲ့ မူလ ရည်ရွယ်ချက်က အကြမ်းမဖက်ဘူးဆိုပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ တမြို့ပြီးတမြို့ တနယ်ပြီးတနယ်
ကိုယ်ပြောတဲစကား ကိုယ်ဟောတဲ့တရားဘယ်လောက်အထိတာသွားတယ်ဆိုတာ ဆင်ခြင်သင့်တယ်
နောက်ဗျာ ဘယ်ဆရာတော်မိန့်တယ်ဆိုလားပဲ သဘောမကျဘူး
ဘာသာခြားက ၁၀ နဲ့ရောင်းပြီး ဘာသာတူက ၁၂ ကျပ်ရောင်းရင် ဘာသာတူဆိုင်က၀ယ်ပါတဲ့
အမှန်ရွှေကြည်ဖြစ်စေချင်တာက သူများက ၁၀ နဲ့ ရောင်းနိုင်ရင် ကိုယ်လည်း ၁၀ နဲ့ရောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပဲဖြစ်စေချင်တယ် ဆင်းရဲကျပ်တည်းကြတဲ့သူတွေအတွက်ကသက်သာရာပဲရှာဝယ်ရမှာပဲ